नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरे, नाम दर्ताका लागि को-को पुगे निर्वाचनमा आयोग ? — Imandarmedia.com
नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरे, नाम दर्ताका लागि को-को पुगे निर्वाचनमा आयोग ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिएपछि नेकपा (एमाले) भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ । माधव नेपाल समूहले संसद् विघटनको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
यी घटनाक्रमसँगै पार्टी पुन: लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । ‘ओलीजीको प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँमा जाने हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय नै छ । हाम्रो हिजो(शनिबार) पनि बैठक बसेको थियो, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले भने ।
निर्वाचनमा आयोगमा माधव नेपाल निकट विद्यार्थी नेताले दिए नेकपा एकीकृत दर्ताका लागि निवेदन
झलनाथ खनाल- माधव नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेता जीवन राईले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पार्टीको नाम ‘नेकपा एकीकृत’ र चुनाव चिन्ह ‘कलम’ प्रस्ताव गर्दै आयोगमा निवेदन परेको हो।
राईले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसअघि कलम चिन्हबाट गत जेठ ६ गते बागमती प्रदेश अन्यतर्फ रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भएका थिए। उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई हराएका थिए।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेभित्र बढेको विवादलाई यो उपनिर्वाचनले झन् तिक्कता बढाएको थियो। एमाले भित्रको विवाद बढेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बरिष्ट नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित ११ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेका छन्।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा नेकपा नाममा अर्को दल पनि दर्ताका लागि निवेदन परेको छ। नेकपा लोकतान्त्रिक नामक दलले निवेदन दिए पनि आयोगले विधान संशोधनका लागि फिर्ता पठाइदिएको छ। उक्त दलले गोलाकार भित्र पाँचकुने तारा चुनाव चिन्ह राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
के भन्छन् राई ?
राईले आफु अध्यक्ष रहेको २५ सदस्यीय कार्यसमिति सदस्य रहेको पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए । ‘मैले निर्वाचन आयोगमा एक महिना अघि नै पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको हुँ’, राईले भने, ‘४५ दिनपछि दर्ता प्रमाणपत्र लिन आउनु भनेर आयोगले भनेको छ ।’
उनले आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) रहेको बताए । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत पार्टीको नाम हो । कलम चुनाव चिन्ह छानेको छु’, राईको भनाई छ । राईले कतिपयले एमालेको माधव नेपाल समुहको निर्देशनमा पार्टी दर्ता गरेको भनेर आशंका गरेपनि आफुले स्वतन्त्र ढंगले गरेको दावी गरे ।
‘म अनेरास्ववियुबाट विदा भएपछि पार्टीले जिम्मेवारी दिएको थिएन । त्यसैले खाली बस्नुभन्दा पार्टी दर्ता गरौ भन्ने सोचेर दर्ता प्रक्रियामा गएको हुँ । माधव नेपालसँग यसबारे जोड्न जरुरी नै छैन’, राईको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको वातावरण बनाउन युवा नेताहरूको माग
विपक्षी गठबन्धनसम्बद्ध युवा संगठनका नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाहीको वातावरण बनाउन अपील गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह), जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र विवेकशील साझा पार्टीका युवा संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरुले राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको वातावरण निर्माण गर्न अपील गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक संकट सिर्जना गर्दै देशलाई सिक्किमीकरण गर्न उद्दत रहेको आरोपसमेत उनीहरुले लगाएका छन् । बहुमत सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि विकल्प प्रस्तुत गर्दागर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु त्यसैको कडी भएको उनीहरुको आशंका छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सिर्जना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लान उद्यत छन् ।’
विज्ञप्तिमा कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघ नेपाल (माधव नेपाल समूह)का अध्यक्ष नरेश कुमार शाही, जसपाको समाजवादी युवा संघका अध्यक्ष योगेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे र विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाति कदमको डटेर सामना गर्न उनीहरुले नेपाली युवाहरुलाई आह्वान गर्न गरेका छन् ।